Kismaayo News » Jaaliyadaha Kenya iyo Uganda oo gurmad gaarsiiyay Muqdisho
Jaaliyadaha Kenya iyo Uganda oo gurmad gaarsiiyay Muqdisho
Kn: Wafti balaaran oo ka socday jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalalka Kenya iyo Uganda oo uu hor kacayay fadiilatu Sh. Maxamed Cabdi Umal ayaa caasimadda dalka gaarsiiyay deeq gargaar oo ay u wadeen walaalihii ku waxyeeloobay qarixii 14 Octobar ka dhacay isgoyska Zoobe.
Wafuudan oo markii hore la kulantay ra’iisul wasaare Kheyre kadibna kulan kale la yeeshay madaxweyne Farmaajo ayaa wareejiyay lacag gaaraysa sadex boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah oo ay iska soo uruuriyeen jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Kenya iyo Uganda.
Jaaliyadda Kenya ayaa ku yaboohday $300 000, halka Jaaliyadda Uganda ay keentay $53000. Madaxda qaranka ayaa jaaliyadaha Kenya iyo Uganda uga mahadceliyay gargaarka.
Qarixii Zoobe kadib jaaliyadaha Soomaalida ee dal iyo dibad ayaa gurmad u fidiyay walaalahooda ku waxyeeloobay qaraxa. Shacabka Puntland ayaa ku dhawaad nus malyuun doolar ku tabarucay halka jaaliyadaha dibadduna ay gacan weyn ka gaysteen.
Masiibadii Zoobe waxay Soomaalida tustay awooddooda iyo sida hadii ay isku tiirsadaan aysan cid kale ugu baahnayn, waxaase loo baahanyahay in la sii adkeeyo midnimada iyo wax wada qabsiga si looga kaaftoomo gacan shisheeye.